Soo Dhaweyn Aan Hore Loo Arag Oo Loo Sameeyey Maareeyaha Cusub Ee Marsada Berbera | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Soo Dhaweyn Aan Hore Loo Arag Oo Loo Sameeyey Maareeyaha Cusub Ee Marsada Berbera
Hargeysa (Hubaal)-Maareeyahah cusub ee dekedda Berbera Md Axmed Yuusuf Dirir, ayaa soo dhaweyn ballaadhan loogu sameeyey inta badan tuulooyinka ku taxan waddada u dhaxaysa magaalooyinka Berbera iyo Hargeysa, waxana soo dhaweyntiisa si weyn u bilayey oo ka muuqday shaqaaleweynaha marsada Berbera.
Dadweynahan oo si weyn u abaabulnaa, isla markaana watay gaadiido tiro badan oo sawirrada maareeyaha lagu xardhay, ayaa si ka duwan sidii loosoo dhaweyn jirey masuuliyiinta kala duwan ee gobolka Saaxil loo magacaabo usoo dhaweeyey maareeyahah cusub, waxana madasha ka muuqatay in maareeyaha cusub yahay shakhsi saamayn ballaadhan ku leh gobolka Saaxil.
Dadweynaha usoo kallahay soo dhaweynta maareeyaha cusub, ayaa waxa si weyn uga dhex muuqday shaqaaleweynaha dekedda Berbera, kuwaas oo soo cidleeyey shaqooyinkii ay hayeen si ay u muujiyaan taageerada maareeyaha cusub ee dhawaan la magacaabay.
Sidoo kale waxa ay dadka soo dhaweynayey maareeyaha cusubi ku dhawaaqayeen inay sagootiyayaan maariyihii hore ee dhawaan xilka laga qaaday, kaas oo lagu wado inuu dhawaan xilka wareejini doono.
Dadka soo dhaweynayey maareeyahah cusub waxa sidoo kale ka dhex muuqday oo laga dhex arkayey shaqaalaha wasaaradda Maaliyadda, gaar ahaan kuwa kastamka Berbera, kuwaas oo muujiyey sida ay diyaarka ula yihiin inay maareeyaha cusub wada shaqayn dhaw yeelan doonaan.
Maareeyaha cusub, ayaa markii uu gudaha magaalada Berbera galay waxa munaasibad ballaadhan loogu qabtay Hutel Mansoor ee magaalada Berbera, halkaas oo laga jeediyey hadallo lagu soo dhaweynayey maareeyaha cusub, isla markaana lagu sagootiyayo maareeyaha hore oo isagu aan goobta joogin.
Tan iyo intii uu madaxweyne Siilaanyo golihiisa xukuumadda ku sameeyey isku-shaandhaynta cusub oo saamaysay in ka badan afartan masuul, ayaa waxa uu maareeyaha cusub ee marsada Berbera uu noqonayaa masuulkii ugu horreeyey ee soo dhaweyn loo sameeyo isagoo aan xilkii weli la wareegin, waxana soo dhaweynta ka muuqatay mid ay shaqaalaha iyo waxgaradka reer Berbera ku muujinayaan inaan la tebi doonin maariyihii xilkan muddada dheer soo hayey Md Cali Xoor-xoor.